Ethiopia oo soo dhaweeysay Aqoonsiga Mareeykanka ee doowlada Soomaaliya
Home Somali News Somali Government Ethiopia oo soo dhaweeysay Aqoonsiga Mareeykanka uu Siiyay doowlada Soomaaliya
Ethiopia oo soo dhaweeysay Aqoonsiga Mareeykanka uu Siiyay doowlada Soomaaliya
Wasaarada arimaha dibadda ee Etiopia ayaa si rasmi ah usoo dhaweeysay aqoonsiga ay doowlada Mareeykanka mudo 22 sano ah kadib aqoonsatay doowlada Soomaaliya.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaarada arimaha dibadda Ethiopia ayaa waxay ku sheegtay, in aqoonsiga Mareeykanka uu aqoonsaday doowlada Soomaliya ay timid kadib horumarada ay Xukuumada Soomaaliya u qaaday dhanka nabadgalyada iyo Xasiloonida kahirgashay wadanka bilihii ugu danbeeyay.
Sido kale war saxaafadeedkan ayaa lagu xusay in Mareeykanka taageero intii hore kabadan kana ballaaran uu siin doono wadanka Soomaaliya, sidokalena uu hada wixii ka danbeeya uu si toos ah xiriir ula samayn doono doowlada Soomaaliyeed.
Doowlada Mareeykanka si toos ah uma goosan xiriirka kala dhaxeeyay Soomaaliya mudadii bur burka waxaana si dadban ay ula shaqeyn jirtay xukuumadihii KMG ahaa iyo maamuladii dalka kajiray, iyadoona dhaqaale badan ku bixisay sidii loo ciririb tiri lahaa ururka Al-shabaab oo qayb ka ah urur weynaha Al-qaacida.
Mareeykanka ayaa hada qorsheeynaya inuu markale dib uga furto Safaaradiisa magaalada Muqdisho, iyadoo hadda doowlada Soomaaliya ay sheegtay in dhul KMG ah ay siiyeen mareeykanka si ay markale 22 sano kadib dib ugu furtaan Safaaradooda.
Doowlada Mareeykanka Khamiistii lasoo dhaafay si cad u sheegtay ineey aqoonsatay doowlada Soomaaliya, wixii hadda ka danbeeyana ay ula macaamili doonto sida laba wadan oo xor ah oo kale.
Soomaaliya 20kii sano ee lasoo dhaafay ma lahayn doowlad rasmi ah, laakiin dhamaadka sanadkii lasoo dhaafay 2012 ayay Soomaaliya markii ugu horeesay yeelatay baarlamaan rasmi ah, Madaxweyne Cusub, RW cusub iyo Dastuur cusub, sidokale Ciidamada Soomaaliya oo garab milatari ka helaya kuwa AMISOM ayaa Al-shabaab ka saaray magaalooyin farabadan.